Hurumende yeBritish Islands Islands: An agile mhinduro kuCOVID-19 inodiwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » British Virgin Islands (BVI) Nhau dzichipaza » Hurumende yeBritish Virgin Islands: An agile mhinduro kuCOVID-19 inodiwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • British Virgin Islands (BVI) Nhau dzichipaza • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Hurumende yeBritish Virgin Islands: An agile mhinduro kuCOVID-19 inodiwa
31 min kuverenga
Iye Akanaka Gavhuna, J. U Jaspert
rakanyorwa Harry S. Johnson
Chirevo pane Anotevera Matanho paNguva yeKudzoka
Zuva rakanaka kune vese,
Ndinokutendai nekupinda nesu mangwanani ano. Ndakamira pano naHuremekedzwa Gurukota uye Anoremekedzwa Gurukota rezvehutano kuendesa mhinduro pane yedu COVID-19 mhinduro uye kwatiri kuti titange danho rinotevera mumhinduro yedu.
Nezuro, Khabinethe yakasangana kuti iongorore zvazvino Covid-19 zviyero uye nyaya dzichangobva kuzivikanwa dze COVID-19 mukati meTerritory - iyo ikozvino yakamira pamakumi matatu neshanu kesi dzinoshanda. Gurukota rezvehutano vanozoisa rumwe ruzivo nezve mamiriro azvino ehutano kusanganisira huwandu hwakawanda hwebasa riri kuitwa nenyanzvi dzekurapa kuyedza nekutarisa hutachiona. Vemitemo vedu vanochengetedza mutemo vanga vachiitawo basa rakanaka rekuona kuchengetedzeka kwedu, kusanganisira kuchengetedzeka kwegungwa, izvo zvakakosha pakudzivirira pamatambudziko anotapirirwa nekufambiswa. Ndinoda kutora mukana uno kuvatenda.
Isu - Hurumende yenyu - takagara tichitaura kuti mhinduro inonamira kuCOVID-19 inodiwa. Khabinethe inofanirwa kugara ichiongorora data, pfungwa dzenyanzvi uye matambudziko ari pamberi pedu uye anoenderana. Zvakakosha sekuyedza kwevanoona nezvekurapa uye nevamiriri vemitemo, ndiko kuedza kwenharaunda yedu. Yasvika nguva yekuti isu tigadzikane zvakare kurwisa hutachiona uhu uye kuchengetedza zviwi zvedu. Tatamira kuchikamu chinotevera muzvirongwa zvedu - uye tinoda munhu wese kuti atitsigire mune izvi.
Rega nditange nekutaura, isu hatisi kuunza izere makumi maviri nemana maawa kukiya muBVI. Ipo iyi iri sarudzo, inouya nemutengo wakakura - mune zvehupfumi, zvemagariro, nepfungwa. Naizvozvo, isu tinoda kunzvenga izvi kana zvichibvira, kuti tirege kuwedzera kuomarara kune vanhu vakatotarisana nenguva yakaoma kwazvo.
Izvo zvakakoshawo kuyeuka kuti isu takatarisana nekutyisidzirwa kwenguva refu kubva kuutachiona uhu, kutyisidzira kwaisazonyangarika kana BVI yaizopinda mukukiya kwemavhiki mashoma. Zvizhinji sekuda kwedu isu, hatigone kuronga kuve takazara COVID-19 yemahara munguva pfupi iri kuuya uye zvingave zvisina musoro kuita kudaro. Zvinogona kuve mwedzi yakawanda, kunyange yakatopfuura, kudzamara nyika yabuda kubva panguva ino. Saka pachinzvimbo, isu tinofanirwa kushandisa inotevera nguva kudzidza kudzidza neCOVID-19 kuitira kuti nzanga yedu nehupfumi zvirambe zvichienderera munguva-refu, pane kuramba tichivhara nekuvhura.
Nzira yakanakisa yekuita izvi uye kumisa kutapurirana ndeyekugadzirisa maitiro edu. Izvi zvinoreva kuremara munharaunda, kupfeka kumeso kumeso, zvichitevera matanho ehutsanana uye kudzikisira mikana yekutapurirana kuburikidza nenguva yekudzoka.
Naizvozvo, itsva Curfew Order ichatanga kushanda mangwana kwevhiki mbiri. Kubva Chitatu 2 Gunyana matanho anotevera anotevera achashanda:
Kuchave nekuvharirwa kwakaomarara kubva pa1: 01pm zuva rega rega kusvika na5: 00 mangwanani ega ega. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kugara mukati meyakaganhurirwa yeimba yako kana yadhi pakati pemaawa awa.
Tinoda kuti munhu wese agare pamba zvakanyanya sezvinobvira. Maawa mashoma ekufambisa ndeekufamba kwakakosha chete, sekutenga zvekutengesa kana mushonga kana kutora mashoma kurovedza muviri.
Ndokumbirawo usaungane mumapoka, shanyira imwe imba kana kuita zviitiko zvisina basa. Paunobuda, unofanirwa kupfeka chifukidzo chemeso chinonyatsovhara mhino nemuromo.
Pakati pemaawa e5: 00 mangwanani uye 1pm nhamba shoma yemabhizinesi akakosha ichave yakavhurwa. Nzvimbo dzese - mabhizimusi, mahofisi uye zvitoro - vanofanirwa kuona vashandi vavo nevatengi vachichengeta chinhambwe che6ft mukati nekunze kwenzvimbo uye kuti munhu wese akapfeka mask yekumeso. Ivo vanofanirwa kupa nzvimbo dzekuchenesa nemaoko, kuve nechokwadi chekuchenesa uye kwakajairwa uye nekuisa marongero munzvimbo yevashandi nevatengi kuti vataure zviratidzo.
Zvinorambidzwa kufamba kwemidziyo pamusoro penzvimbo dzemvura zvinoramba zviripo - hapana kufamba kunotenderwa kunze kweavo vane mvumo yekudaro.
Mahombekombe ese achavharwa nenguva dzegumi nembiri kuitira kuti vanhu vagone kudzoka kumba na12: 1 pm zvinoenderana nemutemo wekutiza. Unogona chete kushanyira mahombekombe kune kurovedza muviri, kwete kwekusangana nemapoka kana kuita mapato.
Zvikoro zvinoramba zvakavharwa uye chinzvimbo ichi chichaongororwa vhiki mbiri dzese idzo Gurukota redzidzo raanogona kutsanangudza zvizere Vadzidzisi vanozobvumidzwa kuwana makamuri avo ekugadzirira zvigadzirwa zvekudzidza uye zviwanikwa zvepamhepo.
Kuona kutevedzera kwakazara, tiri kusimudzira Mapurisa nekuchengetedzwa kweSocial Monitoring Task Force avo vachange vachishanyira nzvimbo uye vachiona nzvimbo dzeveruzhinji. Pachave ne zero-shiviriro mutemo kune vanhu kana mabhizinesi vachityora mitemo. Mutemo urikushandurwa kubvisa yambiro pakutadza kwekutanga. Kana iwe ukawanikwa uchityora nguva yekusvika pamba kana kutadza kupfeka kumeso kumeso kana nharaunda daro, unogona kupihwa faindi ipapo ipapo - $ 100 kune vanhu uye $ 1000 yemabhizinesi. Mabhizinesi anogona kuisa panjodzi yekuvharwa kana vakatadza kumanikidza matanho ekuparadzanisa munharaunda kana kuvhura vasina mvumo. Vanhu vamwechete vanokwanisa kumhan'ara kusatevedzera mutemo kana kunetsekana kumapurisa nekufonera 311. Ndokumbirawo imi mose mutore basa rekutichengeta tese takachengeteka.
Sezvaungatarisira, tinofanirwa kuronga zvakare zvimwe zvikamu zvevashandi veveruzhinji kuti vasangane nechido chitsva chekutarisa magariro, kurongeka kwehutano hweveruzhinji uye mhinduro yakazara yeCOVID-19. Mahofisi kubva munzvimbo yese yebasa reruzhinji anozopihwa basa sezviri kudiwa kuti vatsigire Social Monitoring Task Force. Vachave nebasa rekumanikidza matanho uye kuongorora kutevedza. Isu tinovavarira kuenderera bhizinesi redu senguva dzose basa uye nekupa akakosha masevhisi kuruzhinji - kunyangwe kuburikidza nemadhijitari chiteshi kana uchinge uchishanda kure. Ndinoda kutaura kuti maita basa reruzhinji nekuchinja kwavo uye kuzvipira panguva ino.
Munguva pfupi pfupi ndichaendesa kune Gurukota rezvehutano vanozotaura zvakadzama nezvezvikonzero zvezviyero izvi. Mutungamiri wehurumende achazoburitsa zvakadzama kubva mukukurukurirana kweKhabhinethi
Ndinoda kuvhara nekukwidza rwekupedzisira kuruzhinji kuti vafadze kutevedzera zviyero izvi - zvinoti, gara pamba, tevera nguva yekudzoka kumba, pfeka kumeso uye nzvimbo yekudyidzana. Vhiki rapfuura kana zvakadaro rave chiyeuchidzo chinotyisa chekutyisidzira kwatinotarisana nako. Ndinoziva vanhu vazhinji vanga vachiita nezviyero uye ndinoda kutaura kuti mazvita kune mumwe nemumwe wenyu. Zviito zvako zvakaita mutsauko chaiwo uye zvakatibatsira kuti tigare takachengeteka.
Kune avo vanhu uye mabhizinesi asingaite - ino ndiyo nguva yaunoda kuti uchinje maitiro kuitira nharaunda. Kukundikana kutevera matanho aya kuzvida uye kunoisa munhu wese panjodzi. Nzira chete yekudzivirira kuzara kwemaawa makumi maviri nemasere ndeyekuti munhu wega wega atevedzere.
Ndinoziva kuti inofanirwa kunzwa sekunge Hurumende yako iri kubvunza zvakawanda kwauri. Ndinoziva kuti vanhu vazhinji vakarasikirwa nemari yavo uye vakatarisana nekusagadzikana kukuru uye kunetseka pamusoro pemwedzi yapfuura. Iyi nguva yanga yakanyanya kuomera isu tese. Maitiro atinoita chikamu chinotevera chichava chakakosha sezvo isu tichiramba tichidzidza kubata neCOVID-19 uye kuyeranisa nzanga yedu uye hupfumi nenjodzi yehutano. Tichabudirira kana tikaramba tiri pamwe chete senharaunda kurwisa hutachiona uhwu takabatana.
Saka ndokumbirawo, garai pamba, dziviranani uye mutibatsire kukunda COVID-19.
CHITSAUKO NEMUTUNGAMIRIRI KUNA gurukota rezvemari
ANokudzwa ANDREW A. FAHIE
COVID-19 Kushanda Kudzivirira uye Kushanda Kupedza
Zuva rakanaka uye maropafadzo aMwari kwauri vanhu veaya akanaka maVirgin Islands.
Panguva ino, tinozviwana tiri pamharadzano dzenzira apo taifanira kugadzirisa chirongwa chedu chiripo uye kugadzirisa nzira yedu, zvakare.
Isu taive nehupfumi zvakare munzira uye nekuda kweumwe kana vaviri vasina mutemo isu tadzoka kuno ndoda kukona imwe.
Vazhinji havagone kutevera vashoma.
Vagari vedu nemabhizinesi havafanirwe kuitwa kuti varambe vachitambura nekuda kwekusazvibata kwevanhu vashoma nekuda kwekukara uye kushaya rukudzo kumaVirgin Islands edu.
Ini ndoda kutaura zvakajeka kuti idzi mhando dzezviito hadzizofuratirwa neHurumende yako.
Vanhu vanoita zvese kana chero zviitwa zvisiri pamutemo vanozotsvagwa zvine simba votongwa. Avo vanoda kuburitswa vanozoendeswa. Iyo BVI haizoshandiswe senzvimbo yekutakura vanhu kuenda kuUSVI uye zvakare kubva kuUSVI kuenda kuBVI munzira yekuenda kumusha kwavo. Hurumende yako haizobvumidze zviitwa zvevashoma vanhu kukanganisa hupenyu hweBVI nehupfumi hwedu.
Tinotenda vanhu avo vanga vachiuya kumberi kusvika apa kuti vape zvinotungamira uye ruzivo zvine chekuita nezve zvambotaurwa.
Boka revashandi richagadzwa nekukasira kuti riite zvechisimba chiitiko ichi chisiri pamutemo uye nekukurumidza.
Gavhuna weUnited States Virgin Islands, VaAlbert Bryan Jr vakurukura neni zvinetswa zvakafanana munzvimbo imwechete iyi, uye tinovimbisa kuyedza kwedu kubatana mukushanda pamwe chete pasi pehukama hweZuva reUshamwari kugadzirisa nyaya iyi zvachose.
Kuedza uku, pamwe nekuedza kwedu kwemuno, kunotumira meseji yakajeka kune vese vane chinangwa chekuedza kuenderera mberi nemabasa asiri pamutemo munzvimbo medu, kuti kune kusashivirira zero, kushivirira zero, ndinodzokorora zero kushivirira neHurumende yeMhandara. Zvitsuwa kune mhosva.
Ndinotaura pano zvakare kuti vanhu vedu uye mabhizinesi havafanirwe kuitirwa kutambura kune vashoma vasina mutemo. BVI haichazove hubhu zvekare zvezviitiko zvisiri pamutemo. Isu tiri vadiki muhukuru uye hatigone kuramba tichitendera hunhu uhu kuti huenderere mberi.
Sezvaunoziva isu ikozvino tave nespike mune COVID-19 kesi.
Ndakagara ndichitaura kuti hatisati tabuda musango parizvino, uye Gurukota rezvehutano vakasimbisazve izvozvo nemushumo wavo wenyaya dzeCOVID-19 muTerritory.
Kwemwedzi mitanhatu yadarika, tanga tichiyambira munhu wese kuti COVID-19 haisi kutamba nesu uye hatigone kutamba tichitenderera neCOVID-19.
Sezvo isu takaona huwandu hwevakafa huchikwira munyika, kwemwedzi mitanhatu, tanga tichisimbisa kukosha kwazvo kuti munhu wese pano pamba atore izvi zvisingaoneki kutyisidzira kweCOVID-19 zvakanyanya.
Kwemwedzi mitanhatu, tanga tichikukumbira kuti uteerere matanho ekuzvidzivirira uye kutevedzera nzira dzekuchengetedza dzakadai sekugeza maoko ako kwemasekondi makumi maviri, kupfeka masks ekumeso akakodzera paunenge uchienda kuruzhinji, uchichenesa maoko ako nenzvimbo dzebasa, wakamira matanhatu tsoka dzakaparadzana, uye dzivisa kuungana mumapoka makuru.
Kwemwedzi ingangoita mitanhatu, takati kune mweya masere chete uye tine huwandu hwevanhu vanopfuura makumi matatu ezviuru. Ndakataura ipapo kuti hatidi kumboda kuona chero munhu mune chinzvimbo chaunofanira kusarudza anogara kana anofa.
Mushure mekuziva kuti data resainzi rakaratidza kuti iyo BVI ingadai yakave nezviuru zvinopfuura zviuru mazana matatu nemazana masere zvakasimbiswa zve COVID-3,700, mwedzi mitanhatu yapfuura, Hurumende yako kubva pazuva rekutanga fungidziro yanga ichienderera mberi nenzira ine hukasha, ichiisa zvese zvivakwa zvehutano nekudzivirira. matanho munzvimbo yekuchengetedza isu tese takachengeteka. Kune izvi ndinoda chaizvo kutenda vamwe vangu vandakasarudza uyezve nhengo dzese dzeImba yeParamende nemari dzinoda kupfuudzwa kutendera izvi zviitike.
Isu takaisa mari yedu yemutero madhora ekumisikidza yedu yedu COVID-19 yekuyedza lab. Isu takaisa mari mumakiti ekuyedza kutibvumidza isu kuwana zviwanikwa zvekuyedza COVID-19. Uye pamusoro pemakore isu takaisa mari kuvanhu vedu kuvadzidzisa nekuvachengeta mune yekurapa.
Zvakare, isu tiri kudyara mari mukuti iyo Old Peebles Hospital iwedzerwe nyaya yeCOVID-19 inoenderana. Uye, takaunza mubhodhi 22 nyanzvi yezvokurapa kubva kuCuba, zvese chikamu chezviyero zvekudzivirira zvinopesana neCOVID-19. Vanopa vakabatsirawo kuyedza kwedu zvakanyanya nemishonga yekurapa uye zviwanikwa senge, asi zvisina kuganhurirwa kune vanofema mweya, kits yekuyedza kubva kuPublic Health England, pakati pezvimwe zvipo kubva kumasangano akasiyana uye tinovatenda zvikuru.
Asi pano tiri, nekumwe kuedza kwedu kuchidzoserwa nekuda kwekusateerera mutemo kwevashoma.
Ndinoziva kuti ruzhinji rwevagari vedu vanoda kuchengetedza wese munhu kuchengetedzeka, izvo zvandinoziva uye ini ndinotenda, uye kutibatsira kubvisa COVID-19 kubva kumahombekombe edu.
Uye, ndinoziva kuti ava ndivo vanhu vakapfeka zvine hungwaru masikisi avo, vachichenesa maoko avo, vachichengetedza kugara kwevanhu kure kure uye vachiteerera zvese zvirevo nemazano. Uye vanhu avo vanoumba huwandu, uye Hurumende yako neni tinokuombera maoko nekuda kwekuedza uku.
Asi kune avo vashoma vanga vasiri kutora COVID-19 zvakanyanya uye vasina kunyatso gamuchira danho rebasa ravo pachedu rinodiwa kudzikisa kutapurirana kwehutachiona.
Semuenzaniso, isu tine mamiriro ezvinhu apo vanhu vashoma vanga vasiri kutora kuvhara kwemiganhu yedu yeMatunhu zvakanyanya kunyangwe vaiziva kuti yakavharwa. Kuti tigadzirise ipapo gaka iri, takatora mamwe matanho ekuwedzera kusimbisa kuchengetedzwa kwemiganhu yeBVI yegungwa sechikamu cheiyo COVID-19 -maawa makumi maviri nemasere ekudzora sarudzo inotungamirwa neHM Tsika neInishuwarenzi Dhipatimendi pasi pedingindira rinoti: "BVILOVE: Kubatana. uye Kuchengetedza Mahombekombe eGungwa muNew Regular, ”pamwe neRoyal Virgin Islands Police Force.
Tine mumwe mamiriro ezvinhu apo vamwe vedu vari kuita kuungana kwemisa, kushamwaridzana kana kwemhuri nevanhu vasiri mudzimba dzepedyo. Tiri kuita mabiko epamba uye kupukunyuka natete vedu, babamunini uye babamunini. Hatipfeke masiki edu. Hatisi kure nevanhu. Tinoderedza varindi vedu nekuti imhuri yedu. Ipapo tinodzokera kudzimba medu uye tinounza chipo chisingadiwe uye chinotyisa cheimba yeCoronavirus kune vedu vatinenge tichida. Izvi ndizvo chaizvo zviri zvimwe zvemamwe makesi atakadzidza nezvazvo.
Chokwadi ndechekuti, hatigone kutaura nekutarisa kune mumwe munhu kuti ane COVID-19 here kana kuti kwete; vangave vatakuri kana kwete; kana kuti vanayo, asi havasi kungoratidza zviratidzo. Nekudaro, isu tinofanirwa kuwedzera kuchenjera uye kufamba zvine hungwaru. Tinofanira kusangana zvakasiyana. COVID-19 yachinja nzira yatinobatana nayo kusvikira mushonga wawanikwa. Chokwadi chinorwadza ndechekuti isu tinofanirwa kurarama uye kushanda pamwe neCOVID-19 uye nzira chete yekuita izvi neepamusorosoro yekubudirira kutevedzera matanho uye kuita zvatinoparidza.
Zvino, isu tine nyaya apo mamwe mabhizinesi anga asiri kutevedzera matanho ekudzivirira. Ivo vakasunungura matanho kusvika iko zvino apo vanhu vari kuwanda uye vasingachenese kana kushambidza maoko avo pavanopinda muzvivakwa. Vamwe havana kupfeka masiki kana nhoo uye ivo havana kumira uye vakagara tsoka nhanhatu (6) tsoka, futi.
Kugara pamwe nekushanda neCOVID-19 hachisi chinyorwa, asi asi ichi ndicho "Chinyowani Chichiitika."
Ndinoombera mabhizinesi mazhinji ari kunamatira kuhutano uye matanho ekuchengetedza.
Nekudaro, yave nguva yekuchinja magiya. Kubva panguva ino zvichienda bhizimusi chero ripi zvaro pakatariswa rinotadza kutevedzera zvimiro zvemagariro zvichakurumidza kubhadhariswa uye rezinesi ravo rekutengesa richamiswa kudzamara faindi yabhadharwa.
Dzimwe nhanho dzinozoiswawo kukurudzira mabhizinesi uye mumwe nemumwe wedu kutevedzera nzira dzakatenderwa dzemagariro.
Yasvika nguva yekuchinja mafungiro edu pamabatiro atinoita neCOBV-19. Ino inguva yekuchinja maitiro uye mafungiro edu.
COVID-19 ine zano rimwe uye ndiko kupararira kubva kumunhu-kuenda-kumunhu. Isu, nekudaro, tinofanirwa kuve nezano rimwe-rekushanda pamwe chete kuchengetedza isu tese takachengeteka munhu-ne-munhu.
Inguva yekuti isu tibate mumwe nemumwe kuzvidavirira kutevedzera matanho aya akagadzirirwa kutichengetedza tese takachengeteka.
Nezuro, Chipiri, 31st Nyamavhuvhu, Khabinethe yakasangana tikakurukura nezvenzira yakabatana yekuenda kumberi. Isu takaita sarudzo, unova muyedzo wekumhanya kwatiri kudzidza kurarama nekushanda kuburikidza neCOVID-19. Zviziviso zvakaitwa naGavhuna munguva pfupi yapfuura neKabineti zvinoratidza kutarisisa uye zvisarudzo zveKabineti zvakaziviswa nezano revatambi vedu vanokwanisa uye vane ruzivo kubva kumativi ese ePublic Service.
Kana isu tisingakwanise kurarama kuburikidza nematanho aya, ipapo tinenge tichidzorera kumashure zvikamu zviviri nezvitatu zvehurongwa hwekuvhurazve, uye nekuwedzera hupfumi hwedu. Iwe wakasarudza Hurumende kuti itungamire, uye titungamire isu tichadaro.
Isu tese takatsungirira kuzvipira uye kushandisa mari uye Hurumende yako yanga ichishandisa nzira dzakadai sekudzoka kumba kubatsira kubata kufamba kwevanhu uye, nekuita kudaro, kudzikisira mikana yekupararira kweutachiona.
Kuitira kuona kuti kushanda nesimba kwedu nekuzvipira kwedu hakusi kudzikira nekuda kwezviito zvisina basa zvevanhu vashoma, Khabinethe yakurudzira kuti National Security Council irayire Gweta Gurukota kuti rinyorwe gwaro idzva reKuramu (Nha. 30) kuisa yakatemwa nguva yekudzokera kumba kwemazuva gumi nemana kutanga kubva pa14nd Nyamavhuvhu, 2020 kusvika 16th Nyamavhuvhu 2020 kubva 1:01 pm kusvika 5:00 am zuva nezuva. Iyi nguva yekudzoka kumba yakakosha kudzora kufamba kwevanhu kuti vadzikise kukanganisa kweCoronavirus pane huwandu hweBVI. Izvi zvinobvumidza timu yehutano mukana wekuenderera mberi nekuwana vanhu zviri nyore sezvavanoramba vachitsvaga nehasha uye kuyedza kubva kumatare aripo akasimbiswa. Zvichitaurwa zviri nyore munhu wese anofanira kunge ari mudzimba dzavo kwemazuva gumi nemana anotevera pakati pemaawa e14: 1 pm kusvika 01:5 am zuva nezuva.
Kurambidzwa kwekufamba kwemidziyo muMatunhu emvura kuchaenderera. Iko hakuna zero kushivirira kana zvasvika kune chero zviitwa zvisiri pamutemo munzvimbo medu dzemvura. Ndosaka vakuru veHM Customs, kusanganisira ese mamwe emitemo ekumisikidza ayo anosanganisira Joint Task Force acharamba achiramba akazvipira kutamba mabasa avo mukuchengetedza BVI yakachengeteka panguva ino ye COVID-19 uye nekupfuura. Panyaya iyi, isu tave kuongorora mitemo iripo kuitira kuti zvirango zvakaomarara uye faindi zviripo kune vanhu vanobatwa mune chero zvisiri pamutemo zviitiko munzvimbo medu dzemvura.
Isu tinoziva kuti kuenderera kwebhizinesi kwakakosha, uye isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti tinopedza zvese kuyedza kuchengetedza kwedu Ndima kuitira kuti tirege kusangana neyakavharwa miniti yega yega. Asi, tichifunga kuti isu hatigone kuvhura ese mabhizinesi pachikamu chekutanga ichi nekuda kwekudikanwa kwekumisa kufamba kubatsira timu nekutsvaga kutsvaga, seCabinet, takafunga kuti chete iwo mabhizimusi akakosha aibvumidzwa kuvhurwa sezvakapihwa muCalfew yapfuura (Nha. 29) ichaenderera ichipa basa kuwedzera kune iwo mabhizinesi anopa masevhisi ekutumira mari pamwe nemakambani einishuwarenzi, makambani emotokari uye magaraji.
Sezvambotaurwa, ndinosimbisazve kuti tinonzwisisa kukosha kwekuenderera mberi kwebhizinesi, ndosaka sedare remakurukota takafunga kuti vanhu vanotevera varegererwe pasi peMutemo weNew Curfew (No. 30) Order, 2020:
Maofficial evanochengetedza vega masevhisi sevatsigiri sezvakatsanangurwa muchikamu chechipiri chePrivate Security Indasitiri Mutemo, 2, vari pabasa, kana vachienda kuenda kana kubva kubasa
Tsika uye maImigration mahofisi ari pabasa, kana achienda kuenda kana kubva kubasa;
Vanhu vanoshandirwa mumakambani einishuwarenzi nechinangwa chekuburitsa nekuvandudza marongero uye vanhu vane vanhu vanogadzwa vanofanirwa kuzadza zvinyorwa ivo pachavo;
Vanhu vanoshandirwa munzvimbo dzeveruzhinji uye dzakazvimiririra masevhisi ekuchengetedza marara, vari pabasa, pavanenge vachienda kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa mukubvumidzwa kwekugoverwa kwemafuta uye kuendesa masevhisi, ari pabasa, kana achienda kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa sevoruzhinji uye vakazvimiririra vanopa rubatsiro rwevanhu, vari pabasa, pavanenge vachienda kuenda kana kubva kubasa.
Vatongi naMajisitiriti nevamwe vanhu vanoshandirwa muMatare, vari pabasa, pavanenge vachienda kuenda kana kubva kubasa;
Vanhu vanoshandirwa mumabasa emamochari, avo vari pabasa, kana vachienda kuenda kana kubva kubasa;
Vanhu vanoshandirwa zvinangwa zvekubatsira, avo vari pabasa, kana vachienda kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa sevanodaidzira zvechimbi-chimbi, vari pabasa, kana vachifamba kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa sekutakura, kutakura uye kutakura zvinhu, vari pabasa, kana vachienda kana kubva kubasa.
Vanhu vanobatanidzwa kupa apostille uye zvine hukama nemitemo, avo vari pabasa, kana vachienda kuenda kana kubva kubasa
Vanhu vanoshandirwa sevapi venhau uye vanopa nhepfenyuro, vari pabasa, kana vachienda kuenda kana kubva kubasa;
Vanhu vanoita zvekurima zvekurima zvechokwadi kana hove dzinoda kukurumidza kuchengetedza mhuka nevanhu vanopa mabasa ezvipfuyo vari pabasa, pavanenge vachienda kana kuenda kubasa.
Vanhu vanoshandirwa mumabasa ekufambisa (kupa chekufambisa kune akakosha uye akakosha mashandiro), vari pabasa, pavanotyaira kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshanda muzvitoro vanopa masevhisi kune uye kune akakosha uye akakosha mashandiro, vari pabasa, kana vachienda kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa kunzvimbo yehutano nekukurumidzira mashandiro avo vari pabasa, pavanenge vachienda kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa mubazi rezvepamutemo uye rezvemari rinotenderwa naGavhuna kuita chaiwo uye nekukurumidza mashandiro emutemo uye emari mabasa asingagone kuitiswa kure kana nenzira dzemagetsi, vari pabasa, pavanenge vachienda kana kubva kubasa;
Vanhu vari kufamba munzira kuenda kuchiteshi kana nendege sekubvumidzwa neKabineti pasi peImigration uye Pasipoti (Yakatenderwa Ports yeKupinda) (Amendment) Mitemo, 2020, (isina nzira) nechinangwa chekubva muTerritory;
Vanhu vanoshandirwa kugadzirisa dzimba nekukurumidza zvebhizimusi, vari pabasa, pavanenge vachienda kuenda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa nemakambani ekuchenesa, kushambidzika, zvipembenene, makemikari uye ekudzivirira bug, avo vari pabasa, pavanenge vachienda kana kubva kubasa.
Vanhu vanoshandirwa nemabasa ekubvisa mari;
Vadzidzisi muzvikoro zveveruzhinji uye zvakazvimirira vanopinda zvikoro zvavo nechinangwa chega chekuwana zviwanikwa zvekurairirwa pamhepo; uye
Vanhu vanoshandirwa nemakambani emotokari uye magaraji;
Vanhu vanoshandirwa mubazi rezvekufambisa, vanotenderwa naGurukota reImigration, kuti vaite zviito zvekukurumidza zvekufambisa izvo zvisingakwanise kuitwa kure kana nenzira dzemagetsi, vari pabasa, pavanenge vachienda kana kubva kubasa.
Nekuda kwekuita kuti zvivakwa zvipihwe mutoro wekusara zvichiteerera nezviyero izvi, Khabinethe yakafunga kukwidziridza veSocial Monitoring Task Force nemabasa ekumisikidza pamwe nehutungamiriri pasi peMutevedzeri waGavhuna Hofisi, mukutaurirana neEnvironmental Health Division.
SeHurumende, tinogona kukuvimbisai imi vanhu kuti sarudzo dzedu dzinovakirwa pazano, dhata, uye ungwaru kubva kuvakuru vehunyanzvi, kurudziro kubva kune vazhinji veNhengo dzeImba yeParamende panguva yemusangano usina kurongwa, uye maererano zvigadzirwa zvePublic Health Ordinance, iyo Quarantine Act uye Infectious Zvirwere (Chiziviso) Mutemo.
Ndinotenda kuvanhu vangu veVirgin Islands. Isu ndisu tinofanirwa kudzora zvatakatemerwa. Takasununguka kuita chero zvatinoda zvichibva nekodzero dzedu, asi isu hatina kusununguka pamhedzisiro yezviito zvedu. Mumwe nemumwe wedu anofanirwa kuita mutoro zvakanyanya kupfuura nakare kose, kunyanya mune ino COVID-19 nguva.
Mune zvese zvatakabudirira kubudikidza nazvo uye zvese zvatichasangana nazvo pamberi, zvakakosha kuti muzive kuti Hurumende yenyu iri kugara ichifunga nezvematambudziko uye kuoma uko matanho aya angatiunze. Semutungamiri webhizinesi reHurumende ndinoda kutenda kune wese nhengo yeHurumende nerutsigiro rwavo uye kutenda munhu wese neminamato yavo. Ini ndinofanirawo kutenda vanhu veVirgin Islands nekubatana kwako uye nenhengo dzese dzeKabineti.
Vanhu veVirgin Islands, isu tinofanirwa kumira uye kuomerera kune aya ehutano uye ezvekuchengetedza matanho izvozvi kuti tikwanise kuve nechokwadi chekubudirira kwezvikamu zviviri nezvitatu zvekuzarurwazve kwedu kweBritish Virgin Islands.
Izvi ndizvo zvandinoreva kana ndichiramba ndichiti tiri mune izvi pamwe chete.
Ndosaka Hurumende yako ichiziva kuti inguva yekutora mamwe matanho akaomarara.
Iyi Dunhu ichave yakabudirira uye isu tinotsiura muzita raJesu chero mazwi asina kunaka akataurwa pachena kana chinyararire pamusoro penzvimbo ino, kunyanya maererano nehupfumi nekuchengetedzeka kwedu. Tinozvitsiva nemashoko ekubudirira. Madzitateguru edu akanamata kuna Mwari uye vakashanda nesimba kuti budiriro yeiyi Teru ibatsire chizvarwa ichi. Zvino isu tichaita zvakafanana isu pachedu uye nezvizvarwa zvinotevera.
Ndinotenda kuvanhu vangu veVirgin Islands. Isu ndisu tinofanirwa kudzora zvatakatemerwa.
Isu tiri mumodi yeOperation Containment uye Operation Eradication.
Hurumende yega haigone kukudzivirira kubva ku COVID-19. Tese tine basa rekuzvidzivirira isu, mhuri dzedu uye neumwe neumwe.
Iwo wega mutoro uchaita shanduko huru mu COVID-19. Ndiro basa rako kukuchengetedza iwe, avo vanokukomberedza, uye nekuwedzera iyo BVI.
Ngatichinjei nharaunda yatiri kugara. Ngatirambei tichirega kutora chero mikana. Hupenyu hwese hwakakosha.
Ndinoteterera kune wese munhu ari muBVI zvisinei nemamiriro ako ezvinhu kuti auye kumberi kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wakanganiswa neCoronavirus uye uchiedzwa.
Ndinokutendai mose muri kukurudzira vamwe kuti vakure uye vasasarura vanhu vari kuda kuuya kumberi kuti vaedzwe, avo vari kugara kwavo kwavo voga, kana kuti vangangodaro vakawana hutachiona pane imwe nguva. Dana runhare rwekurapa pa 852-7650 uye ronga musangano nhasi.
COVID-19 haina rusarura; saka, nei tichifanira?
Hurumende nevanhu veVirgin Islands pamwe nenyika dzese vari kurwisana nemuvengi akanyarara, watisingakwanise kuona anonzi Coronavirus kana COVID-19.
Kurwa uku hakusi kwekuti unotaridzika sei. Kurwa uku hakusi nezve mukurumbira wako. Uye kurwa uku hakusi nezve chinzvimbo chako chekutama.
Iyi kurwira ndeye hutano hwako. Zviri nezve kuchengetedzeka kwako. Ndezve mhuri yako nenharaunda yako. Izvo ndezvedu tese tichishanda pamwechete kuti tiite chikamu chedu uye chengetedza COVID-19 kunze.
Kana vanhu vakatadza kuomerera kune ese mamwe matanho ari kuiswa izvozvi kuti ave neCOVID-19, saka, uye chete ipapo, isu tinomanikidzwa kuita 24-awa-gumi nemazuva-zuva kukiya pasi, saka vanhu vangu sarudzo ndeyenyu , sarudzo migodhi.
Tinogona kutevedzera kana isu tinofanirwa kutakura mhedzisiro.
Ndakambotaura izvi kare uye ndichazvitaura zvakare, isu tine mukana wegoridhe wekutakura iyi nyaya izvozvi uye nezveramangwana apo isu tichigara nekushanda mu'New Regular 'neCOVID-19.
Ngatiregei kuzvifuridza. Asi zvirinani uzviite nemazvo. TINOGONA KUPINDA PAMUSORO PENYAYA PAMWE chete kana tangoita chikamu chedu uye kuramba takasvinura.
Uye ndinopedzisa nekutaura kuti Mwari anesu! Uye kwaAri tiri uye kwatiri, uye kwaAri zvese zvichave zvakanaka.
Mwari ngaaropafadze maVirgin Islands aya.
Harry S. Johnson anga achishanda muindasitiri yekufambisa kwe 20 makore. Akatanga basa rake rekushanya semushandi weendege kuAlitalia, uye nhasi, anga achishandira TravelNewsGroup semupepeti kwemakore 8 apfuura. Harry anofarira globetrotting mufambi.
Vhura US Border ine COVID yekuuya bvunzo: Nyika ...
Ndege kubva kuBudapest kuenda kuParis dzakatangwazve neTransavia
Hawaii yakaipisisa nyika muUS kune pet-inoshamwaridzika ...
MaMultilateral Vatungamiriri Taskforce pane COVID-19: Dambudziko ...
Nyowani 'mamiriro ehunyanzvi' COVID kuyedzwa kuLiverpool John ...
Japan kuzivisa COVID-19 Nyika yeEmergency mumasere ...
Thai's Koh Samui Inotangazve Kuvharirwa ...
British Airways Flights Kubva London Heathrow to Saint ...
Moscow Sheremetyevo Airport Inovandudza Solution Nyowani ye ...
Wepasi wekutanga COVID-19 DNA jekiseni rakagamuchirwa muIndia
USA Pamutemo Ine Inodhura Zvikuru Shanu-Nyeredzi Mahotera Mu ...
Iyi ndiyo nzira yekupedzisa denda paPasi?
Nharembozha-ins dziri kudzoka kuLufthansa nendege
Bucket Chinyorwa Chinyorwa: Zvitatu musts zvekupedzisira ...
Kusimudza zvirambidzo parwendo rwekunze kuenda kuUSA ...
Kufamba kweUS: Federal mask mandate yekuwedzera zvine musoro
Nyowani Yevashanyi Kuchengetedza Chigadzirwa cheSpanish Mapurisa eCamino ...
Kubva kuItari Trasporto Aereo Ndege kuenda kuAlitalia ...
Emirates inotangazve ndege dzeMauritius, kunge chitsuwa ...
Chinjana muDoha, Abu Dhabi, Dubai: Ndege Vanofamba ...
Vakazara-Vakatemerwa US uye EU Vashanyi Vachave Boon Ku ...
Air Canada inotanga basa idzva risingamire pakati ...
German Condor Ndege Yemazuva Ano Inoita Fleet Iine 16 Nyowani ...
Haiti Inokumbira Mauto eUS Kuchengetedza Nyika ...
Kutyisa kunotyisa muTanzania: Gunman afa
UNWTO General Assembly Morocco: Chakavanzika chisati chave ...
Yekumhanya-kumhanya kubatana kwese kwese muCanada, UK ...
Indaneti Yezve Zvinhu Ichave Iine Basa Rakakura Mukutumira ...
Vols kubva Kazakhstan kuenda kuMaldives paAir Astana ...
Turks neCaicos Islands Dzidzorere TCI Yakavimbiswa Kufamba ...
Kuenda ku Vegas? Rongedza Masiki ako
Qatar kuvhura anopfuura zana mahotera matsva eFIFA 100 Nyika ...
Masangano ekufambisa anopikisa: Gurukota rezvekushanya muItaly ...
Lufthansa Boka rinozivisa Nyowani Chief Strategy Officer
Usati Waenda Kunzvimbo Yako Yezororo: Shop ...
Carnival yekushanda pa75% yeFleet Kugona nekupera kwe ...
Guta repasirese uye risingadhuri kutsemuka kweguta